साडी कसरी लगाउने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? हेरौँ २ मिनेटमै साडी लगाउने सजिलो तरिका (भिडियो सहित्) – Khabaarpati
November 20, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on साडी कसरी लगाउने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? हेरौँ २ मिनेटमै साडी लगाउने सजिलो तरिका (भिडियो सहित्)
–कोही–कोही सारीसँग धेरै गरगहना लगाउन मन पराउँछन्। सारीसँग गहना सुहाउँछ भन्ने धेरैलाई लाग्छ। तर, हरेक सारीसँग गहना सुहाउँदैन। सारी नै हेभी डिजाइन र इम्ब्रोइडरी गरिएको छ भने त्यससँग हेभी गरगहना सुहाउँदैन। यस्तो सारीसँग हलुका गहना लगाउनुपर्छ।–हिल जुत्तामा सजिलो महसुस नगर्ने वा लगाउन नचाहनेले सारी नलगाएकै बेस। सारीसँग हिल जुत्ता नै राम्रो देखिन्छ। सादा फ्ल्याट जुत्ता सारीमा सुहाउँदैन।
–सारीसँग सबै कुरा म्याचिङ हुनुपर्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ। कन्ट्रास्ट गरेर लगाएको राम्रो देखिन्छ। सारी र ब्लाउज एउटै रङको छ भने चुरा र टीका फरक रङको लगाउनुपर्छ। यसो गर्दा स्टाइलिस देखिन सकिन्छ।–सारी कम्मरमा बाँध्नुपर्छ। कम्मरभन्दा धेरै माथि बाँधेको सारी राम्रो देखिँदैन।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,